Ny maraina ihany no mangalatra kely mivarotra ary tena alefa mora ny entana kanefa vitsy tena vitsy ny mpividy ary indraindray aza dia mody maina tsy misy vola. Ny Paska no mba nantenaina ho tsara tsena kanefa very an-javona ny fanantenana noho ny toe-draharaha misy ankehitriny. Nanazava ny mpivarotra kiraro fripy iray etsy amin’ny Coum 67 ha fa taloha tsy mbola tafiditra teto ny valan’aretina dia mahalafo kiraro 4 isan’andro farafahakeliny rehefa tena tsy misy ny tsena. Ny tombony amin’izany dia 30 000 Ariary raha tena maka kaonty ambany. Velona tsara izahay 4 mianaka hoy Atoa Rija na dia misy aza ny hofantrano sy ny jiro ary ny saram-pianaran’ny ankizy. Fa ny tena mampikaika dia mbola misy ihany koa ny findramam- bola natao tamin’ny Orinasa Mpampindram-bola madinika iray nampitomboana ny entana herintaona lasa izay. Mbola misy enim-bolana vao vita ny famerenam-bola ary soa fa anisan’ny tafiditra tao anatin’ireo afaka mandoa vola tsikelikely araka izay fahafahana ny tenany. Mandalo fahasahiranana tanteraka izahay mpivarotra kiraro fripy hoy hatrany Atoa Rija satria ny entana efa mihena isan’andro ary tena amidy mora hamonoana antoka kanefa lany sakafo ny vola. Manginy fotsiny ny hofantrano sy ny jiro tsy maintsy aloa hoy hatrany izy. Tsara ho marina fa anisan’ireo tokony miato aloha tahaka ny varotra akanjo ny varotra kiraro amin’izao fepetra manokana fihibohana izao satria tsy tafiditra ao anatin’ireo entana laharampahamehana amin’ny fiainana andavanandro tahaka ny sakafo sy ny fanafody.